किन दिइन रविनाले मिडियाकाे नाममा सुसार्इड नोट लेखेर मर्ने धम्की? – भिडियो – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > किन दिइन रविनाले मिडियाकाे नाममा सुसार्इड नोट लेखेर मर्ने धम्की? – भिडियो
admin September 27, 2018 Uncategorized 0
काठमाडौँ । पछिल्लो पटक मिडियामा अर्बाधिक चर्चाा आएकी रबिना बादी नामकी युवतीले पछिल्लो समय मिडियाको नाममा सुसाईड नोट लेखेर आत्माहत्या गर्ने धम्की दिएकी छन्। लामो समय सामाजिक सञ्जालमा एकपक्षिय रुपमा भाईरल भएका रबिनाबा पतिको युट्युबमा अन्तरवार्ता आएसँगी रबिना छाँयामा परेकी थिईन् । उनका पतिको अन्तरवार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा रबिनाको निकै आलोचना भएको थियो।
उनका श्रीमानले आफुँलाई रबिनाले बाबाु विदेशमा रहेको र आमाले अर्कै बिहेगरेपछि आफुँलाई सैतेनी आमाले घराम बस्न नदिएकाले तनाबमा रहेको, मुटुको भल्बमा समस्या रहेको जस्ता कुराहरु गरेर मायाँमा फँसाएको बताएका थिए। उनका पति रबिलालसँगै रहेकी रबिनाले मिडियाकै अगाडि श्रीमानमाथि जाईलागेकी थिईन्। त्यसपछि मिडियामा आएकी रबिनाले हरेक कुराकानीमा आफुँलाई मिडियाले बोल्न नदिएको र श्रीमानकै पक्षमा कुरा गराएको गम्भीर आरोप लगाउँदै आएकी छन्।
हेर्नुहोस् रबिनाको पछिल्लो अपडेट भिडियो:
भर्खरै निर्मलाकाण्डका मुख्य संदिग्धकाे नाम बाहिरियाे, सबैले साेचभन्दा फरक निस्कियो परिणाम!
फेरि खुल्दैछ अक्टोबर ३ देखि अमेरिकन इडिभी लोटरी, यस्ता छन नयाँ नियमहरू… बुझेर मात्रै भर्नुहाेला
निःशुल्क खाना बाँड्दै मनकारी स्वयंसेवकहरु
पाकि स्तानी सेनाको गो लीले नेपाली गमिलको बिहे गर्ने सपना चकनाचुर पारेपछि गाउँ नै शोकमग्न